China Polymer UHMWPE Mkpanaka Ogwe Ogwe Ram Extrusion Machine Dia 25mm-80mm Manufacturer and Supplier | SuKo
1. Njirimara PTFE （UHMWPE） Ram Rod Extruder PFB20
Site na mmelite na-aga n'ihu, akụrụngwa ahụ mara ihe, na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ nke ọma.
Ngwongwo a na-ejikwa usoro PLC na-ejikwa ya rụọ ọrụ akpaghị aka.
Na iche iche imewe, na akụrụngwa nwere ike izute dị iche iche mkpa nke ọrụ, na-ahaziri maka ndị ahịa.
Akụrụngwa ahụ na-agba ọsọ ogologo oge, yana obere mkpọtụ. Ma belata ụgwọ site na ịchekwa ike na ume n'oge nrụgide nrụgide.
Akụrụngwa na ebu sitere na teknụzụ pụrụ iche, nrụrụ corrosion, inogide na ogologo ọrụ ndụ.
Ngwa akụrụngwa dị mfe ma weghara obere ohere.
Ngwaahịa ndị nwere ngwaahịa nwere arụmọrụ ka mma n'ihe gbasara njupụta na ike ike.
Ejiri ya na usoro nri na-akpaghị aka, na-ejuputa bọket nke 50-80 n'arọ, usoro nri nri na-akpaghị aka nwere ike ịkwado oge 4-8 nke ọrụ ma chekwaa ụgwọ ọrụ na oke.
PTFE ebule extruder ike nọgidere inupụ mkpanaka na mkpanaka nwere ike bee dị ka chọrọ.
Inye usoro ebu zuru oke, nke gunyere usoro zuru oke nke ngwa ndi kwesiri, kpo oku na sistemụ arụmọrụ, sistemụ jụrụ oyi, njikwa ọnọdụ okpomọkụ, ihe nkwado, wdg.
Onye na-eme ihe ngosipụta nke na-esi na ya apụta elu ruo na ala. Enwere ike itinye akụrụngwa na ala nke abụọ ma ọ bụ n'elu ikpo okwu.
2. Akụrụngwa na-arụ ọrụ Gburugburu Gburugburu
Achọrọ ala nke saịtị ahụ ka ọ dị larịị, ibu ọrụ saịtị ahụ abụghị ihe na-erughị ihe achọrọ.
Igwe eji arụ ọrụ chọrọ oghere dị ọcha iji belata uzuzu ikuku. Ọ kachasị mma ịnweta ọwa ikuku ventilashion na ogbako ahụ iji kwado ikuku ikuku.
Industrial ike ọkọlọtọ 380V 50Hz 3P, voltaji nwere ike ahaziri dị ka onye ọrụ mkpa.
Ejiri ụlọ ọrụ na-ekesa ụlọ ọrụ, ikuku ikuku na ngwaọrụ ndị ọzọ na-akwado ya.
Akụrụngwa kwesịrị ịkwado ya na sistemụ jụrụ oyi. Enwere ike iji bọket abụọ / tank mmiri mee ihe na mgbapụta dị jụụ iji megharịa mmiri.
Temperaturelọ okpomọkụ nke osisi kwesịrị ịbụ ihe karịrị 28 Celsius C.
Ngwongwo extrusion a na-ahụ anya na-esi n'elu gaa na ala. A na-etinye akụrụngwa n'elu ikpo okwu ma ọ bụ n'ala ya na elu ya dị ihe dị ka mita 2.8. Ekwesiri ịtụle ụzọ dị ogologo na ụzọ ogologo nke ngwaọrụ a, na ị ga-enwerịrị ogo dị elu n'okpuru oghere okirikiri nke ngwaọrụ ahụ iji mezuo ihe achọrọ ogologo nke mkpanaka PTFE.
Igwe akụrụngwa extrusion kwesịrị ịtụle ụzọ dị irè na ntụzi akụrụngwa nke akụrụngwa, ọ dịkwa mkpa iji hụ ogologo nke mkpanaka PTFE. Akụrụngwa ahụ gụnyere ebu ebu nke 4-7 mita (ewepu ogologo nke extruded okokụre mkpanaka), obosara nke 1.2 mita, a elu nke 1.8 mita.
3. Ngwongwo Ngwá Ọrụ
Ngwaọrụ Ngwaọrụ NKP OBI 80 PFB150
Usoro Mgbapu Vertical Kacha Extrution
Ike KW (Igwe Eletriki) 14 24 33
Rod iche Dia (mm) 4-20 25-80 80-150 (200)
Ogologo Mkpanaka Rod Gaa n'ihu extrude na ogologo na-akparaghị ókè
Njikwa PLC + ihuenyo mmetụ PLC + ihuenyo mmetụ PLC + ihuenyo mmetụ
Mmepụta (Kg / h) 7+ 8+ 10+
Voltaji / PH / Hz 380V 50Hz 3P 380V 50Hz 3P 380V 50Hz 3P
Oriri Ọdụdọ (KW / h) 2+ 2.5 + 3+
Mpaghara okpomọkụ 3-5 4-8 8-12
Machine arọ (n'arọ) 930 960 1220
Igwe Elu (mm) 2150 1800 1900
Igwe Igwe mpaghara (m2 ) 3.5 7 10
Ebu A na-ahaziri ebu ahụ dịka nkọwa ndị ahịa si dị. Ngwakọta zuru ezu na-agụnye ahụ mụọ, isi extrusion, njikọ njikọ, ngwugwu zuru oke nke mgbanaka ọkụ ọkụ dị elu, ihe mmetụta zuru ezu, sistemụ jaket mmiri dị jụụ, na usoro njikọ njikọ dị elu, ebu na nkwado ngwaahịa. N'elu imecha na-akpan mesoo na-eji ire ụtọ, inogide, na corrosion eguzogide. Okpukpo nke mkpuchi mkpuchi bụ ihe karịrị 5mm, na okpukpo kpo oku karịrị 10mm.
4. Ngwunye Ngwa na Mold Installation Diagram
5. Akụrụngwa Na ebu Mmezi
Na-enyocha mgbe niile ịdị elu, ịdị ọcha na ọnọdụ okpomọkụ nke mmanụ hydraulic.
A na-atụ aro ka ị dochie mmanụ hydraulic kwa ọnwa isii.
Anọchie akara eyi akara-adọ.
Ekwesịrị ịkpụzi ebu ahụ ma jigide ya n'oge, ma kwesiri iji mkpuchi dị mkpa nke mmanụ nchekwa kpuchie elu ahụ.
Jiri nlezianya na-ejide ihe ọkụ ọkụ nke ikpo ọkụ ọkụ, ma chekwaa ya nke ọma.
6. Ngwa na mapụtara Parts Description
Akụrụngwa ahụ bụ igwe kachasị, ọdụ ụgbọ mmiri, ọdụdụ njikwa, nri nri akpaka, ndị na-ejide ya, oghere ndị na-ekpo ọkụ, ebu na ngwa ndị ọzọ. Ngwa ndị dị mkpa ngwa zigara ndị ahịa na akụrụngwa.
Edere ndepụta nke ngwa ndị dị mkpa maka akụrụngwa na onye ọrụ na akụrụngwa.
Mgbe onye ọrụ zụtara akụrụngwa ụlọ ọrụ anyị, na mgbakwunye na ngwa ndị dị mkpa, anyị ga-enye ndị ọrụ ahụ akụkụ ahụ dị mkpa iji dochie ma rụkwaa akụrụngwa ahụ. Akụkụ ahụ mapụtara bụ akụkụ ọkọlọtọ ma enwere ike zụta na ahịa mpaghara.
N'ihi na teknụzụ pụrụ iche nke akụrụngwa, ndị ahịa nwere ike ịga ụlọ ọrụ mmepụta ihe ịmụ banyere ntinye, inye ọrụ, ọrụ, mgbanwe ebu, mmezi, ntuziaka usoro nke akụrụngwa n'efu tupu nnyefe.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịbịa n'ụlọ ọrụ anyị iji mụọ ihe n'ihi nsogbu ndị dị ka anya, ndị ọrụ, oge, anyị nwere ike ịhazi ndokwa maka ndị injinia ịbịa duzie ntinye, ntinye ọrụ, ọrụ, ngbanwe ebu, mmezi, na ntuziaka usoro nke akụrụngwa n'okpuru. nkwekọrịta nke ọzọ.
Anyị nwekwara ike iduzi nduzi dị n'ime ime. Ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ ụzọ ndị ọzọ dị ka ekwentị, vidiyo, email, wdg.
8.Mgbe Ọrụ Sales
Site na ụbọchị nnata igwe, oge ikike nke ngwa igwe niile bụ otu afọ. Anyị na-enye ọrụ ndozi ndozi n'efu n'oge akwụkwọ ikike.
Ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla na ngwa ndị ahụ na mpụga oge ikike, biko kpọtụrụ anyị n'oge iji kọwaa nsogbu ahụ, anyị ga-enyekwa mkpebi ntinye n'ime awa 24.
Ọ bụrụ na anyị nwere onye nkesa mpaghara, anyị nwere ike ịkpọtụrụ onye na-ekesa mpaghara maka imekọ ihe ọnụ.
Enwere ike ịjụ anyị ajụjụ niile gbasara akụrụngwa site na mail, vidiyo, ekwentị, wdg.
Ekwentị Ọrụ ： + 86-0519-83999079
9.PTFE Rod Line Akụrụngwa Nri Akụrụngwa
Agụụ akpaka nri, gụnyere abịakọrọ ikuku agbara ịfụ usoro, na-amalite nri usoro, na-asa sooks, mmiri egbe, agụụ generator, PCB njikwa, throughput 30-300 kg / h, dayameta 150mm na elu 600mm, setịpụrụ akpaka nri oge na ịrụzu oge, ntụ eruba bụ controllable, niile igwe anaghị agba nchara mmepụta, ọgụgụ isi akara. Ngwakọta agwakọta bụ 600mm na dayameta na 700mm n'ogo, na 2.2kw mbelata moto, ọsọ na-akpali akpali nke 15-25 ntụgharị / min, 8-10mm nnukwu ala efere, na ikike nri nke 75-90kg.
SKVQC-10 Ndepụta nhazi:
Aha Mbanụ. Ika / Emeputa
Igwe ọkụ ọkụ 1cc China
316L igwe anaghị agba nchara iyo 4pcs China
Agụụ hopper (304 igwe anaghị agba nchara) 1set Suko
Abịakọrọ ikuku agbara ịfụ usoro Azụ azụ azụ 1set New Zealand
Pneumatic akụrụngwa AirTAC
Usoro ikuku efu 1set China
Usoro njikwa Pc osisi 1set Suko
Chingmafe ike ọkọnọ 1cc China
Solenoid valvụ 1cc AirTAC
Ngwunye sose (Φ25) waya eji eme ka eriri sie ike 3M Jamanị
Igwe anaghị agba nchara inu nozulu (Φ25) 1cc L 350mm
Igwe anaghị agba nchara gbọmgbọm 1cc OD600mm; H700mm
Gear moto 1cc 1.5KW 15-20r / m
.Dị Mkpokọta ikuku oriri Nsogbu ikuku
SKVQC-10 180L / nkeji 0.4-0.6MPa
12. Njikọ Nhọrọ Soro
Aha Nkowa di nkpa
PTFE ntụ ntụ tupu sintering Sintering PTFE ike
PTFE ngọngọ crusher Kụrie nchikota ahụ n'ike
Electric sieve ntụ ntụ igwe Igbasa ntụ ntụ tupu ịgwakọta
Recycled ihe ndinuak mmepụta akara Dicer, igwe ịsa ahụ, igwefụfụ
Powder igwekota / ntụ ntụ & inyeaka igwekota Iji mix ntụ ntụ na mmiri mmiri mmanu
Hydraulic mmanya ọnwụ igwe Bee osisi ndị buru ibu dị ka achọrọ
Biko kpọtụrụ anyị maka ndị ọzọ PTFE nhazi akụrụngwa.
Osote: Extruder Automatic Machine polima PTFE Rod Ram PFB150 Dia 80mm-150mm
Site na bịara :
Mgbe obi uto imeso ha, ezigbo onu ahia
Site na Rick :
Enwere m ike ikwu
Site na Ralph :
Enweghi ike iti onu ahia, mkpuchi mkpuchi bu ezigbo ihe!
1 2 3 … 9 Osote "
Dee nyocha ebe a:
Aha gị *
Star akara *